အေးမွတဲ့ဒသေက သဘာဝပုံရိပျတှရေဲ့ဖနျဆငျးရှငျ ယိုဟနျးနကျဈ ဟြူးချြ နှငျ့ အငျတာဗြူး – Digital Photography Myanmar
HomeInspirationအေးမြတဲ့ဒေသက သဘာဝပုံရိပ်တွေရဲ့ဖန်ဆင်းရှင် ယိုဟန်းနက်စ် ဟျူးခ်ျ နှင့် အင်တာဗျူး
October 19, 2016 Jedi Inspiration 0
ခရီးသွား ဓါတ်ပုံပညာကို ရူးသွပ်သူများဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ 500px အသိုင်းအဝန်းမှာ ပညာပါရမီပြည့်ဝတဲ့ အပြင် ကံထူးစွာနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့က ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလွန်းတဲ့ နေရာတွေကို လှည့်လည်သွားလာပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ရတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ အများစုကို သတိထားမိခဲ့တာကြာပါပြီ။ ဒီနေရာတွေကို အကယ်လို့များ ခင်ဗျားမသွားနိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှ ခင်ဗျား စိတ်ထဲမှာ ပြင်းပြင်းပြပြ သွားချင်တဲ့ နေရာတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး အာသာဖြေတာက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လတ်တလောမှာ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ခရီးသွားဓာတ်ပုံဆရာကိုပြပါဆိုရင်တော့ ဥရောပတိုက်တဝန်းမှာ ဘယ်သူမှမရောက်ဖူးသေးတဲ့ နေရာအသစ်တွေကို ရှာဖွေပြီးရိုက်ကူးတဲ့အပြင် လူသိပြီးသား အလွန်လှပတဲ့ နေရာတွေကိုလည်း ပုံစံအသစ်နဲ့ရိုက်ကူးနေတဲ့ ယိုဟန်းနက်စ် ဟျုးခ်ျ(Johannes Hulsch) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 500px မှာတော့ follow လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် စာရင်းမှာ ပါဝင်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို အင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ လိုက်ပ်ဇစ်ဂ်(Leipzig) မြို့အခြေစိုက် ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အမြင်ပုံစံ၊ အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတွေနဲ့ တည်းဖြတ်နည်း၊ ဂီယာတွေ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးဖို့အကြိုက်ဆုံးနေရာတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အကျော်ကြားဆုံးဓာတ်ပုံတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က ဇာတ်လမ်းတွေကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အဖေ eBay ကနေ ကင်နွန် DSLR တစ်လုံးကို ကျွန်တော်တို့ မိသားစုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်စပြီး အဲဒီကင်မရာကို စပြီး စမ်းသပ်ရိုက်ကူးတဲ့ အချိန်ကတည်းက ချက်ချင်း ဓာတ်ပုံပညာ ပိုးဝင်သွားပြီး ခပ်မြန်မြန်နဲ့ တိုးတက်လာတာပဲဗျာ။
ခင်ဗျားရဲ့ ဓာတ်ပုံပညာပုံစံကို ဘယ်လိုမျိုးများ ဖော်ပြချင်လဲဗျာ?
သဘာဝရဲ့ အလှအပတွေကို ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ပုံစံနဲ့ စိတ်ခံစားမှုပေါ်မူတည်ပြီး ဖော်ပြဖို့ကို ကျွန်တော် အလွန်နှစ်သက်ပါတယ်။ နေ့လည်နေရောင် ပြင်းပြင်းကို ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အတွက် နေထွက်ချိန်နဲ့ နေဝင်ချိန်တွေမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရွှေရောင်နဲ့ အပြာရောင် ကောင်းကင် အချိန်တွေကို အကြိုက်ဆုံးပါ။
ခင်ဗျားကို လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အရာကို ဘယ်နေရာမှာများရှာတွေ့ခဲ့ပါလဲ?
ရာသီအမျိုးအမျိုးကြောင့် ပြောင်းလဲနေတဲ့ သဘာဝရဲ့စွမ်းအားက ကျွန်တော့်ကို အမြဲလွှမ်းမိုးမှုပေးခဲ့ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလိုပါပဲ ရိုက်ကူးဖို့ ခက်ခဲပေမယ့် နေရာတစ်နေရာတည်းကို တစ်နှစ်ထဲမှာ ရာသီမတူတဲ့အချိန်တွေမှာ သွားရောက်ရတာ နှစ်သက်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွေက ရာသီပြောင်းတာနဲ့ အမျှ မြင်ကွင်းတွေက တစ်နှစ်လုံး ပြောင်းလဲနေပါတယ်။
ကျွန်တော့်အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုက မနက်စောစောထရတာ ဆိုတာပါပဲ၊ အထူးသဖြင့် မနက်ခင်း နေအထွက် ရွှေရောင်အချိန်မီအောင် နွေရာသီမှာ စောစောထရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရိုက်ခဲ့သမျှ ဓာတ်ပုံအတော်များများက ပင်ပန်းခဲ့သမျှ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာနဲ့ တန်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိပါတယ်။ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတဲ့ နေရာမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ နေရာကောင်းကို ရှာရတာလည်း စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ အင်တာနက်ကို နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုပြီး ကျွန်တော့်အတွက် နေရာကောင်းကိုရှာရသလို တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတဲ့ နေရာစိမ်းတစ်ခုကို အထုပ်ဆွဲပြီး ကားမောင်းသွားရတာလဲ ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ တခါတလေတော့ ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံမှမရဘဲ လက်ဗလာနဲ့ ပြန်လာရခဲ့တာမျိုးလဲရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျတော့လည်း အခြားသူတွေကိုပြဖို့ အံ့သြဖို့ ကောင်းတဲ့နေရာသစ်တွေရဲ့ ပုံတွေကို မင်မိုရီကဒ်အပြည့် ပြန်ပါလာမျိုးလဲရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့ ဓာတ်ပုံဆရာဘဝ အစမှာတော့ လိုအပ်တဲ့ ဂီယာတွေဝယ်ယူဖို့ ငွေကြေးအခက်အခဲ ရှိခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော် ရှိတာနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပြီး ဂီယာတွေ ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကို မေ့ထားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေခင်ဗျားရဲ့ iPhone လိုမျိုးပစ္စည်းနဲ့ တောင်ရိုက်ကူးလို့ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ဈေးအရမ်းကြီးတဲ့ full frame DSLR ကိုမျှော်မှန်းဖို့မလိုပါဘူး။ ဓာတ်တစ်ပုံကို ဖန်တီးတာ ခင်ဗျားပါ၊ ကင်မရာမဟုတ်ပါဘူး။
ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်ကြိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ နေရာအချို့ကိုပြောပြပါလား?
ကျွန်တော့ မိဘတွေနေတဲ့ အောရ် (Ore) တောင်တန်းတွေမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာတကယ် နှစ်သက်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွေက ဘယ်သူမှလဲရှာမတွေ့သေးသလို ဘယ်မှာမှလဲ အရေးတယူပြောပြထားခြင်းမရှိတဲ့ နေရာတွေပါ၊ ရေအိုင်လေးတွေ ကွင်းပြင်ကြီးတွေနဲ့ တောနက်ကြီးတွေ စုစည်းထားတဲ့ နေရာတွေပေါ့။ ၂၀ရာစုလောက်က ထင်ရှားတဲ့ သတ္တုတွင်းဖြစ်ခဲ့လို့ ဒီနေရာကသမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ ဆိုရှယ်နက်ဝပ် follower တွေအတွက် ဒီနေရာအလှအပတွေကို နည်းနည်းလောက် ပိုပြီးဖော်ပြချင်စိတ် လည်းရှိတယ်လေ။ ဒိုလိုမိုက်စ်(Dolomites)၊ ဆွစ်ရေခဲတောင်တန်းတွေ(Swiss Alps) နဲ့ နော်ဝေးက ရေခဲမြစ်တွေလိုမျိုး ဂန္တဝင် နေရာတွေမှာ အခြားအခြားသော Landscpae ဓာတ်ပုံဆရာတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်သလိုမျိုး သွားရောက်ရိုက်ကူးရတာလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီနေရာတွေက အရမ်းလှတယ်လေ ပြီးတော့ အဲဒီမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် မကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံမျိုးရဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ လူမှုကွန်ယက်အသီးသီးမှာ follower တွေအများကြီးရှိတာ ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်၊ ဒီလိုမျိုး လူမှုကွန်ယက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုက လျှို့ဝှက်ချက်များရှိလား?
ခင်ဗျားရဲ့ follower တွေကို အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုနဲ့ အဲဒါကို ဆက်တိုက် ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်မှုက အခရာပဲလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုလောက်ပဲ အာရုံစိုက်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော့ဥပမာအရ အင်စတာဂရမ်ပေါ့၊ ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ အင်စတာဂရမ်ကလည်း ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ တဖြည်းဖြည်း တူလာပြီလို့တောင် ခံစားနေရပြီဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အခြားသော လူမှုကွန်ယက်တွေဖြစ်တဲ့ 500px, Tumblr နဲ့ Viewbug တို့ကို ခြေဆန့်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်ကွန်ယက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းကွက် ဆိုးကွက်က ရှိပြီးသားဆိုတာတော့ ကျွန်တော် ပြောပါရစေ၊ အဲဒီအတွက် ကွန်ယက်တစ်ခုချင်းစီမှာ မတူညီတဲ့ ကျွန်တော့် ဓာတ်ပုံအချို့ကို ပြသပါတယ်။ ဒီ လူမှုကွန်ယက်တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ ကျွန်တော့ ဓာတ်ပုံအားလုံးကို တွေ့သွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဒီကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ follower တွေအတွက် အကောင်းဆုံး ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာတယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ ကင်မရာအိတ်ထဲမှာ ဘာတွေများရှိသလဲဗျာ?
Canon 5D Mark III ကတော့ အဓိက ကင်မရာပေါ့၊ 16-35mm မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ဘီလူး၊ 50mm 1.4 ကို focus ကောင်းကောင်းယူဖို့အသုံးပြုသလို 28-300mm tele မှန်ဘီလူးတစ်လုံးပါ ထည့်ထားပါတယ်။ မကြာခင်အနာဂတ်မှာတော့ Sigma 35mm တစ်လုံးကို ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီး ဒီမှန်ဘီလူးက ကျွန်တော့ အတွက် bokeh ကောင်းကောင်းပေးမယ့် ဒုတိယ မှန်ဘီလူးဖြစ်လာမှာပါ။ Sirui T – 005X Traveler light ထရိုင်ပေါ့ကို ကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်။ Long Exposure ဓာတ်ပုံတွေအတွက်တော့ HAIDA တံဆိပ် filter မျိုးစုံကို အသုံးပြုပါတယ်။ ကင်မရာနောက်ကွယ်က မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံတွေအတွက် iPhone ကို အိတ်ထဲမှာ အမြဲဆောင်ထားပါတယ်။
ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်နည်းစနစ်တွေက ဘာများပါလိမ့်?
ကျွန်တော့်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာနဲ့ အများဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်တာကတော့ Lightroom ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ဆိုရင် Snapseed ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ Pack Six က ထုတ်လုပ်တဲ့ VSCO Film preset တွေအများစုကို Lightroom မှာ အသုံးပြုပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ filter တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော့ဓာတ်ပုံတွေကို ပိုကြည့်ကောင်းအောင် နည်းနည်းတော့ ထပ်မံပြုပြင်ပါတယ်။ ဥပမာ မှောင်နေရင် လင်းပေးတာ၊ အရမ်းလင်းနေရင် မှောင်ပေးတာ စသဖြင့်ပေါ့။ Lightroom မှာ တည်းဖြတ်ပြီးတာနဲ့ iOS ရဲ့ AirDrop ကိုအသုံးပြုပြီး ကွန်ပျူတာကနေ ဖုန်းထဲကို ရွှေ့ပြောင်းပါတယ်။ အဲဒီ iPhone ထဲကိုရောက်သွားတာနဲ့ Snapseed ကို ထပ်မံအသုံးပြုပြီး စိတ်ကြိုက်အရောင်တွေရအောင် iPhone မျက်နှာပြင်မှာ ကြည့်လို့ကောင်းအောင် တည်းဖြတ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းသို့မဟုတ် နောက်နှစ်ထဲမှာ ဘယ်ကိုခရီးထွက်ဖို့စီစဉ်ထားလဲ?
နွေရာသီနဲ့ ဆောင်းရာသီအတွက် ခရီးစဉ်တွေကို ကျွန်တော် စီစဉ်ထားပြီးပါပြီ။ ဖင်လန်နိုင်ငံကို အရင်ဆုံးခရီးထွက်ပါမယ်။ တောတွင်းဝက်ဝံရိုင်းတွေနဲ့ ဒရယ်တွေကို တွေ့ရဖို့ မျှော်လင့်ထားလို့ပါ။ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဖက်ပိုင်းတွေကို ခရီးထွက်ပါမယ်။ စက်တင်ဘာလမှာတော့ နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ The Revenant ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နေရာတွေရှိတဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံကို ခရီးထွက်ပါမယ်။ ဆောင်းဦးရာသီမှာတော့ ရေကန်တွေနဲ့ တောင်တန်းတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးဖို့အတွက် Dolomites ကိုထပ်မံသွားရောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ၂၀၁၇ အတွက်ကတော့ ကျွန်တော်ဘာမှ မစီစဉ်ရသေးပါဘူးဗျာ။ ဒါပေမယ့် အိုက်စ်လန်နိုင်ငံနဲ့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကို သွားဖို့ ကျွန်တော် စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်၊ ကြီးကျယ်တဲ့ Landscape ဓာတ်ပုံကောင်းတွေကို အဲဒီမှာ ရိုက်ထားထားတာ ကျွန်တော်တွေ့ပြီးသွားပါပြီ။
ခင်ဗျားလိုမျိုး ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးချင်ကြတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတွေအတွက် အကြံကောင်းလေးပေးပါဦး?
ခင်ဗျားရဲ့ ဓာတ်ပုံပညာကို တိုးတက်ဖို့အတွက် လေ့ကျင့်မှုဆိုတာ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်စတာဂရမ်က ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့ အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးစေမယ့်အစား ယူကျုက ဓာတ်ပုံပညာနဲ့ပက်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်တာ သင်အားကျတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတွေအကြောင်းတွေးတော တာတွေနဲ့ပဲ ကုန်ဆုံးသင့်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတကယ်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကို အိမ်အပြင်ထွက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပါ၊ အင်တာနက်ပေါ်က မိတ်ဆွေတွေကို ပြသခြင်းအားဖြင့် ဆွဲဆောင်ပါ။ သူတို့ရဲ့ တုံ့ပြန်သံတွေကို နားစွင့်ပါ။ ပြီးရင် ခင်ဗျားရဲ့အလုပ်ကို ပြန်သုံးသပ်ပြီး ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအချို့ကို ဘယ်လိုရိုက်ကူးဖန်တီးခဲ့လဲဆိုတာ အောက်မှာ ဆက်လက် ဖတ်ရှုပါဦး။
ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံကို Dolomites ဒေသက Lago Di Carezza ဆိုတဲ့အရပ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ အဲဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း မာလင် ကတ်ဖ်ကာ နဲ့ အတူရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခရီစဉ်က တကယ့်ကို ကတိုက်ကရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မာလင် အီတလီကို ခရီးမထွက်ခင်တစ်ရက်အလိုမှာ ကျွန်တော်က Dolomites ခရီးစဉ်ကို လိုက်လို့ဖြစ်လားလို့မေးခဲ့လို့ပါ။ အဲဒီရေကန်ရဲ့ နံနက်ခင်း နေထွက်ချိန်က တကယ့်ကို အံမခန်းပဲဗျာ၊ ရေပြင်ကအလွန်တည်ငြိမ်နေတော့ နောက်ခံတောင်တန်းတွေအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကြေးမုံတစ်ချပ်လိုဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။
ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တုန်း အချိန်က နံနက်ခင်း အစောကြီးဆိုတော့ ဘယ်သူကမှ ကျွန်တော်တို့ကို လှေငှားချင်စိတ်မရှိကြဘူးဗျာ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း အကြံအဖန် နည်းနည်းလုပ်ရတာပေါ့။ ပုံထဲမှာ ကျွန်တော်လှေလှော်နေတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ဒီလှေက ကြိုးချည်ပြီး ကမ်းကပ်ထားတယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်။ လှေထဲကိုပဲ ကျွန်တော်ဆင်းပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာပါ။
နံနက်ခင်း နေထွက်ချိန်နဲ့အတူ လှပတဲ့ ရက်ကော့ဇ် တံတား ရဲ့ နံနက်ခင်းတွေကို ကျွန်တော်နှစ်သက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံကိုရိုက်ခဲ့တုန်းက ဘာလင်က လာတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ တစ်စု နဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်ထိတိုင်အောင် သူတို့နဲ့ အဆက်သွယ်ရှိနေတုန်းပါပဲ၊ နှစ်ကုန်ခါနီးတုန်းကတောင် သူတို့နဲ့ အတူ ဘာလင်မှာ လည်ပတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီတံတားက ဘယ်သူမှ မရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာရှိလို့ ကျွန်တော်ကြိုက်ရတဲ့ အချက်ထဲမှာပါဝင်တာပါ။ အဲဒီတံတားကို ရောက်အောင် သွားဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲလွန်းလို့ ခရီးသွားတွေသွားလေ့ရှိတဲ့ နေရာမဟုတ်သလို ဓာတ်ပုံဆရာတိုင်းလည်း မရောက်နိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော် နော်ဝေနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့တုန်းက ပရိက်ကတ်စ်စတိုလန် (Preikestolen) ဆိုတဲ့နေရာကို အကြိုက်ဆုံးနေရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တုံးတိတိ ပြတ်နေတဲ့ ကျောက်ကမ်ပါးတွေ အများကြီးပါပဲ၊ အမြင့်ကျောက်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်အဖို့ဆိုရင်တော့ အဲဒီနေရာမှာ ကြာကြာရပ်နေဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး။ ယခုနှစ် မတ်လဆန်းပိုင်းတုန်းက နော်ဝေကို ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ဖူးပြီးပါပြီ၊ ပရိက်ကတ်စ်စတိုလန်အရပ်က အေးခဲနေတဲ့ တောင်တက်လမ်းကြောင်းကြောင့် ရောက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ နေထွက်ချိန်လေးကို ကျွန်တော်တို့ဖာသာ ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ ဓာတ်ပုံ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေဖြန့်ကျက်နိုင်မယ့် နေရာကောင်းတွေအများကြီးကို အဲဒီအရပ်မှာ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
နှစ်ကုန်ခါနီးအချိန်တုန်းက ဗာဗေးရီးယန်း ရေခဲတောင်တွေဆီ အထူးသဖြင့်ဘုရင့်ရေကန် (King’s Lake) ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသ ကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ခရီးထွက်ကာနီး တပတ်အလိုမှ ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်း အန်တန်တို့ ဟိုတယ်အခန်းကို ကြိုတင်စာရင်းပေးရလို့ တိုက်ကရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ နောက်ထပ် ခရီးစဉ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဒေသက ဂျန်နာ (Jenner) တောင်ထိပ်ကို တက်ကြည့်ဖို့ ကျွန်တော်တို့တတွေ ပျင်းနေကြလို့ တောင်တက်ရထားနဲ့တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ နေဝင်ခါနီးအချိန်အထိ တောင်ထိပ်မှာ အချိန်ဆွဲပြီးနေခဲ့ချင်ပေမယ့် အဆင်းလမ်းကြောင်းက တောင်တက်ရထားပဲရှိခဲ့လို့ နေမဝင်ခင် ညနေခင်းမှာပဲရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မြင်ကွင်းကတော့ တကယ့်ကို လှပနေဆဲပါပဲ။ ဒီရေကန်ရဲ့ အပေါ်ဖက်မှာတော့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရေခဲတောင်တန်းတွေကာရံထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် နော်ဝေခရီးစဉ်က ပြန်ရောက်ကာစမို့လို့ ဒီရက်သတ္တပတ်က ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာပါပဲ။ အော်ရ် တောင်တန်းတွေဆိုကို ကျွန်တော့်မိသားစုက စနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်တိုင်း သွားရောက်လေ့ရှိပြီး တစ်ခုသော အားလပ်ရက်မှာ ဒီဓာတ်ပုံကို ကျွန်တော်ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ တောအုပ်တစ်ခုလုံးက မြူခိုးတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ ရာသီဥတုက ကျွန်တော့အကြိုက်ပါ။ တွေ့သမျှနေရာတိုင်း အဆန်းတကျယ်နဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတွက် ကျွန်တော့ ကင်မရာကိုထုတ်ပြီး လမ်းကြောင်းအချို့ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်၊ တည်းဖြတ်ရတာတော့ လွယ်သလားလို့ မမေးနဲ့ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ နော်ဝေခရီးစဉ်တုန်းက နော်ဝေနိုင်ငံ အေနာက်တောင်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းက ရေခဲမြစ်တစ်ခုမှာ ခဏဝင်နားခဲ့တုန်းက ရေမျက်နှာပြင်မှာ အလင်းပြန်နေတာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံဖွဲ့စည်းမှုရတဲ့အထိ ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ စမ်းသပ်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ဒီဓာတ်ပုံမျိုးမှာ အနည်းငယ်ရိုးစင်းပေမယ့် ဒီဓာတ်ပုံရအောင် အားထုတ်ခဲ့ရတဲ့ ကြိုးပမ်းမှုမျိုးကို သဘောကျပြီး ဒီဓာတ်ပုံကလည်း ကြိုးပမ်းသမျှအရာထင်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ယိုဟန်နက်စ် ရဲ့ အခြားသောဓာတ်ပုံတွေကြည့်ချင်ရင်တော့ 500px မှာ Johannes Hulsch ကိုသာ follow လုပ်ထားလိုက်ပါ။
Instagram မှာ Follow လုပ်သင့်တဲ့ နာမည်ကျော် ဓာတ်ပုံပညာရှင် ၈ ဦး